फोटो फिचर – NepalDailyPost
Category: फोटो फिचर
आफ्नो चार वर्षे कार्याकाल सफलतापुर्वक सम्पन्न गरेका नेपाल विधुत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको बिदाई भएको छ । उनलाई प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले आज एक कार्यक्रमको आयोजना गरी केही दिनमा नै फेरि हजुरलाई अर्को कार्याकालको लागि स्वागत गर्न पाइयोस भनी बिदाई गरेका छन् ।…
सहकालका देवताका रुपमा चिनिने रातो मत्स्येन्द्रनाथको रथ आज बाजागाजासहित बुङ्गमती लगिएको छ । यस वर्ष कोरोना संक्रमणका कारण मत्स्येन्द्रनाथको भोटो नदेखाइ सिधै पाटनबाट आज बुङ्गमती लगिएको हो । मत्स्येन्द्रनाथलाई बुङ्गमती पुयाउँदाका दृश्यलाई फोटोपत्रकार सागर बस्नेतले क्यामेरामा कैद गर्नुभएको छ । सागर बस्नेत…
सुर्खेतबाट पश्चिम जाजरकोट जोड्नका लागि निर्माण गरिएको छेडाबजार–साधिविसौना सडक । यो सडक मध्यपहाडी लोकमार्गसँग जोडिएको छ । तस्वीर – हेमन्त केसी
भक्तपुरको सूूर्यविनायक नगरपालिकाअन्तर्गत चित्रपुरमा किसान धान गोड्दै । रोपाइँ सकेपछि धान नकाटेसम्म तीन पटक किसानले धान गोड्ने गर्दछन् । तस्वीर – रत्न श्रेष्ठ/रासस
शे–फोक्सुण्डो गुफामा आइतबार हिमपातका कारण आफैँ लकडाउन !
शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिका–२ शे–फोक्सुण्डो गुफामा आइतबार हिमपातका कारण आफैँ लकडाउन । सरकारले कोभिड– १९ को सङ्क्रमण न्यूनीकरण गर्नका लागि लगाइएको लकडाउन आज २७औँ दिन हो । तस्बिर – हेमन्त केसी / रासस
लकडाउनका कारण सुनसान गोदावरी पार्क !
सुनसान रहेको ललितपुरको गोदावरी पार्क । कोरोना भाईरसबाट देशभर लकडाउनको कारण पार्क सुनसान भएको हो । तस्बिर – प्रदीपराज वन्त
चैत्र शूक्ल पूर्णिमाको दिन काठमाडौंको सुन्धाराबाट देखिएको चन्द्रमा
चैत्र शूक्ल पूर्णिमाको दिन काठमाडौंको सुन्धाराबाट देखिएको चन्द्रमा । तस्वीर – प्रदीपराज वन्त
पाल्पाको निस्दी गाउँपालिका–४ स्थित मित्याल लामेदारका ६० घरधुरी कृषकले १५२ रोपनी क्षेत्रफलमा व्यावसायिक रुपमा लगाएको सूर्यमुखी फूलखेती । तस्वीर – सुशीला रेग्म
ललितपुुरको गोदावरी नगरपालिका– ५ लेलेका कृषकले व्यावसायिक रुपमा लगाएको किवी खेती । तस्वीर – रोशन सापकोटा